OSGEAR ပံ့ပိုးမှု | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
OSGEAR Products Support – How to use, FAQ, ပြဿနာ, Manual and more ….
အရေးအပါဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ optical drive ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ (CD ကို, ဒီဗီဒီ, Blu-ray player) drive ကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် drive ကိုနှင့်အတူအသုံးပြုရလိမ့်မည်ဟု discs တွေကိုအမျိုးအစားများအဖြစ် function ကိုဖြစ်ပါတယ်. The Standardized... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စီပီယူ processor ​​ကို HD Graphics Technology_Internet OS ကို-STORE ပရိုဆက်ဆာ Samsung က နည်းပညာ Software များ Intel က မိုဘိုင်းဖုန်း Nokia က 64-နည်းနည်းက Windows စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ device ကိုမော်ဒယ် ဥပဒေရေးရာအနက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု HTC က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက်
စမတ်ဖုန်းများ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် device ကိုမော်ဒယ် HD Graphics ဥပဒေရေးရာအနက် Samsung က Qualcomm မှ OS ကို-STORE HTC က Samsung ရဲ့ Galaxy Software များ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ စီပီယူ ပရိုဆက်ဆာ Intel က Server ကို Technology_Internet Nokia က Sony Ericsson က နည်းပညာ မိုဘိုင်းဖုန်း စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု 64-နည်းနည်းက Windows processor ​​ကို Intel က